के हो कोरोना लागेर मरेकाहरुलाई समुद्रमा फ्याँकेको भनिएको भिडियोको सत्य? – MySansar
के हो कोरोना लागेर मरेकाहरुलाई समुद्रमा फ्याँकेको भनिएको भिडियोको सत्य?
Posted on April 10, 2020 by Salokya
सोसल मिडियामा अहिले एउटा भिडियो भाइरल भइरहेको छ। विशेषगरी फेसबुकको मेसेन्जरबाट धेरै सेयर भइरहेको यो भिडियोमा समुद्रको छेउ देखिन्छ। अनि त्यहाँ केही लाश देखिन्छन्। भिडियोको अन्त्यतिर केही मानिसहरुले समुद्र छेउबाट ती लाशहरुलाई उठाउँदै गरेको देखिन्छ। भिडियोसँगै अङ्ग्रेजीमा तीन वाक्य पठाइएको हुन्छ। त्यसमा दावी गरिए अनुसार केही देशले कोभिड १९ लागेर मरेकाहरुलाई समुद्रमा फालिरहेका छन्। अनि सुझाव दिइएको छ, ‘त्यसैले सी फूड खान छाड्नुस्। विश्व अन्त्य हुँदैछ, भगवान कृपया हस्तक्षेप गर्नुस्।’
के हो यो भिडियोको सत्य ? हामीले फ्याक्टचेक गर्ने क्रममा भेट्टाएका तथ्य यस्ता छन्।
Some countries throw #Covid19 infected dead bodies into the seas. Advice to stop eating seafood.
Dear God, please intervene??? pic.twitter.com/wDQfdX8Nfq
— Dorje Dolma lama?? (@ddlama444) April 10, 2020
यो भिडियोसँगै राखिएको अङ्ग्रेजी क्याप्सन यस्तो छ-
Some countries throw Covid19 infected dead bodies into the seas. Advice to stop eating seafood. The World is really coming to an end. Dear God, please intervene.
हामीले भिडियोका केही फ्रेमहरु निकालेर रिभर्स इमेज सर्च गर्दा यो भिडियो पुरानो भएको खुल्यो।
गत वर्ष अर्थात् सन् २०१९ को मार्च महिनामा मोजाम्बिकमा चक्रवात आइसकेपछि पनि यही भिडियो फैलाइएको थियो। त्यतिबेला चक्रवातका कारण मोजाम्बिकको समुद्र छेउमा लाशैलाश भेटियो भन्दै फेक न्युज फैलाउने काम भएको थियो।
यो भिडियो त्यो भन्दा पनि पुरानो अर्थात् सन् २०१४ को हो। अफ्रिकी नागरिकहरु युरोपेली देशमा जानका लागि साना डुङ्गाबाट समुद्रमा असुरक्षित यात्रा गर्ने क्रममा दुर्घटना हुँदा उनीहरुको मृत्यु भएको थियो। मृत्यु भएकाहरुको शव लिबियाको समुद्री तटमा फेला परेको थियो। यो त्यतिबेलाको भिडियो हो।
युरोन्युजले त्यतिबेलाको भिडियो युट्युबमा राखेको छ। दृश्यहरु धमिलो बनाए पनि यो त्यहीँकै दृश्य हो भनेर थाहा पाउन सकिन्छ।
योबारे भारतीय साइटहरु अल्टन्युज, क्विन्ट र न्युजमोबाइलले पनि फ्याक्टचेक गरिसकेको छ।
न्युजमोबाइलले भिडियोको एउटा फ्रेमलाई डेलीमेलमा प्रकाशित सन् २०१४ को फोटोसँग मिलेको देखाएको छ।
डेली मेलको सन् २०१४ को समाचार हेर्नुस्।
त्यसैले अहिले सोसल मिडियामा भाइरल बनाइएको भिडियो ६ वर्ष पुरानो अर्थात् सन् २०१४ मा लिबियाको भएको पुष्टि भएको छ। यो भिडियोको कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएकाहरुको लाशसित कुनै सम्बन्ध छैन। सोसल मिडियामा लेखिएका विवरण झुटो हो।
1 thought on “के हो कोरोना लागेर मरेकाहरुलाई समुद्रमा फ्याँकेको भनिएको भिडियोको सत्य?”
श्रीमान संपादक ज्यू,
कृपया यो फ्याक्ट चेक बिधी को बारेमा विस्त्रित मा चर्चा गरे हामी आफै पनि शंका लागेका कुरा आफै चेक गर्न सक्थ्यौ नी।